Ukutya okufunxayo kwabathengisi beenqanawa zokutya okuzincancisayo
Ukuthintela ukwahlula izithako zokutya ngexesha lenkqubo yokuxuba, abantu basebenzisa inkqubo yokuhambisa into eyongezelelweyo ukukhulisa i-gelatinization kunye ne-digestibility yokutya ukuze iintlanzi zikulungele ngakumbi ukufumana isondlo esixubeneyo. Njengoko igama layo lisitsho, ukuhambisa iintlanzi ukutya kubhekisa kwinkqubo yokucinezelwa, ukufunxa kunye nokubumba izithako zokutya kwimilo yeepellets phantsi kobushushu, umswakama kunye noxinzelelo. Ukutya okuxelwayo kunye nokukhutshiwe okuveliswa kukudada intlanzi pellet kwaye i-extruder iyeyona nto iphambili ekutyeni uninzi lweentlanzi ngenxa yokuntywila ukutya kwazo, isondlo esininzi kunye neepropathi zokudada.
inkqubo yokutya eyongezelelweyo yentlanzi
Ukutsala kukuqhubela phambili umxube wezithako zokutya phantsi kobushushu obuphezulu, umswakama kunye noxinzelelo oluphezulu ngaphakathi kwento yokuntywila kwi-pellet mill – Izinto ezingafunekiyo zicinezelwe ngumbumba ofayo. Ngokwamava amaninzi, umncinci kakhulu okanye umphunga omninzi kakhulu kunye nobushushu obufakelweyo kwizithako buza kuvelisa i-pellet esemgangathweni omncinci ngelixa ubushushu obungonelanga kunye nokudityaniswa okungalinganiyo akunakubulala i-pathogenic encinci yezinto eziphilayo ezikhoyo kwii-pellets zokutya. Indlela eya kwi-pellet efanelekileyo yokutya kweentlanzi ifuna ubuchwephesha obuphezulu bokuqhubekeka kunye ne-advanced pellet yokutya okuneentlanzi kunye intlanzi yokutya eyongezelelweyo. Ngokudibana nomzi mveliso wokutya uhlala uzabalazela ukuqhubela phambili ubuchwepheshe benkqubo kunye nomatshini ukuze kuphuculwe amazinga okuguqula ukutya kunye nesondlo sokutya kweentlanzi. Ngoku makhe sixoxe ngenkqubo eneenkcukacha Ukwenza iithayile zokutya zentlanzi.intlanzi ikhupha ukutya okude, kubandakanya inkqubo eyomileyo yokutya okuneentlanzi kunye nenkqubo yokuphuma kondliweyo yentlanzi, Ngaba yinkqubo ye-aqua fish feed extrusion process apho izinto ezingafunekiyo zityhalelwa phambili emgqomeni kusetyenziswa izikrweqe kwaye zixinzelelwe ekufeni ekupheleni komgqomo.. Inkqubo yokukhupha iintlanzi ngokubanzi ibandakanya ubushushu obuphezulu ngexesha elifutshane. Iqondo lobushushu elingaphezulu kwe-100â „ƒ liyafuneka ukuze kufezekiswe ukwandiswa kokutya njengoko kushiya isifa. Ubushushu obuphakamileyo kwindawo eyomileyo ifunyenwe ngokutshiswa kwamandla oomatshini kwiindawo ezifudumeleyo ezifana nebhare kunye nomphezulu, okanye yenziwa yimikhosi ye-Shear phakathi kodonga kunye nezinto kunye nesikhuhli kunye nezinto
1.Ukugaya: ukwenzela ukukhawulezisa inkqubo yokuxuba kunye nokwandisa ukusetyenziswa kwesondlo, abantu kufuneka bagraye izinto ezingafunekiyo zokutya okuziintlanzi kwisuntswana elincinci, ihlala ifuna umatshini otyumkileyo – iidopleti yentlanzi ekondlayo. Ngeli xesha, ubungakanani bezinto ezinamachiza zinefuthe elikhulu kubukhulu bokutya kunye nomgangatho wenkqubo elandelayo yokukhuphela. Ukuthetha jikelele, inqanaba lokugraya uninzi lweentlanzi ezindala zamanzi amatsha malunga 40 imiyalezo (420Nye), ngelixa leentlanzi ezincinci, ngeenxa zonke 60 imiyalezo (250Nye).
2.Ukuxuba: ubuninzi beentlanzi zokutya mihla le zincinci, ngenxa yoko, izithako zokutya kufuneka zixutywe ngokufanayo emva kwenkqubo yokugaya ukuze kuqinisekiswe ukuba intlanzi inokufumana ukutya okondlayo okuvela ekutyeni imihla ngemihla. Iqondo lokuxuba le-blender libaluleke kakhulu kwinkqubo yokuveliswa kwemveliso kuba inokuphembelela umgangatho wokutya kweentlanzi, ngoko ukukhetha umatshini wokudibanisa ofanelekileyo kubaluleke kakhulu. Apha, Sincomela umxube wentlanzi oyityiweyo owenziwe kakuhle FY-500 ngokudibanisa umgubo okanye izinto ezinamachaphaza kunye nokuhamba okuhle.
3.Ukuthengisa: ukuba abalimi beentlanzi bafuna ukuvelisa i-pellet yokutya edadayo efikelela ekujoliseni iithagethi ezisemgangathweni ngokobukhulu, ukuqina, uxinano kunye nolwakhiwo, Bamele bakhethe umatshini wokudibanisa iintlanzi we-pellet ofanelekileyo ngokweendleko zabo zotyalo-mali, ubungakanani bemveliso, kunye nokondla iimpawu kunye nemikhwa yezilwanyana ezahlukeneyo zasemanzini. Imayile yethu yokutyisa yentlanzi edadayo iyakwazi ukuvelisa izilwanyana ezikwizinga eliphezulu zokutya iintlanzi kunye nakwizilwanyana zasekhaya ezifana nenja nekati.. Ngaphezu koko, Akunzima ukuvelisa i-pellets zokutya okusantanta kweedayimitha ezahlukeneyo (ihlala isuka kwi-0.9mm ukuya kwi-15mm), ukutshintsha nje kobukhulu bentlanzi edadayo ipellet mill die mold, enika amafama iintlanzi ukuba zikhethe ngakumbi ngohlobo lwentlanzi kunye nenqanaba lokukhula.